Iitekhnoloji zaMva nje zeTekhnoloji kuThengiso | Martech Zone
Iifowuni eziphathwayo kwimvelaphi yevenkile zombane. ISebe leefowuni eziphathwayo kwivenkile yezobugcisa. Ivenkile yezixhobo zale mihla.
Ukuthengisa kuyinxalenye ebalulekileyo yobomi bomntu wonke. Ngumatshini wehlabathi ophuculweyo ukuhambisa kunye nokusebenzela abathengi kwizizwe zonke. Abantu bayakonwabela ngokulinganayo ukuthenga kwiitena kunye nodaka nakwiivenkile ezikwi-Intanethi. Ke ngoko, ayothusi into yokuba ishishini leentengiso lehlabathi kulindeleke ukuba ifike kwi- $ 29.8 trillion ngo-2023. Kodwa, ayinakuyenza yodwa.
Zininzi izizathu zokuba ishishini lokuthengisa lifune ukugcina isantya sophuhliso lwamva lwetekhnoloji. Ukulandela utshintsho kunye nokwamkela kuya kuvumela ukwanda okukhulu kakhulu kushishino lweentengiso.
Isishwankathelo seMbali yoThengiso lweeRetail
Iivenkile ezithengisa azisoloko zixhomekeke kwi-intanethi ukusebenza. Ekuqaleni, abantu babetshintshiselana ngempahla nangeenkomo kwaye besebenza nzima ukuze bafumane izinto ezininzi. Iivenkile zokuqala zokuthengisa zavela malunga ne-800 BC. Iimakethi zaqala ukukhula apho abathengisi bathengisa khona iimpahla zabo. Injongo yeemarike yayikukuthenga iimveliso kodwa kunye nokuzihlaziya.
Ukusuka apho, ukuthengisa kuyaqhubeka nokukhula. Ngama-1700s, iivenkile ezincinci zomama kunye neepop zosapho zaqala ukuvela. Phakathi kweminyaka yoo-1800 ukuya kweyee-1900, abantu babevula iivenkile zokuqala. Njengoko iidolophu kunye namashishini aphuhliswa, kwafika irejista yokuqala yemali, elandelwa ngamakhadi etyala kunye neevenkile ezinkulu.
Ukukhawuleza phambili kwixesha le-intanethi. Ukutshintshiselana ngedatha ye-elektroniki (i-EDI) ngeminyaka yoo-1960 kwavula indlela ye-ecommerce eyakhwela kwitrone ngeminyaka yoo-1990 xa iAmazon yangena kwindawo leyo. Ukusuka apho, ukuthengisa kuye kwaxhomekeka kakhulu kubuchwephesha, kwaye i-ecommerce iqhubeke nokwandisa umbulelo kwi-intanethi. Namhlanje, imithombo yeendaba zentlalo ibonelela ngamathuba amaninzi entengiso, kodwa abanini bamashishini kufuneka babeke iliso kwindlela yokuziphatha yabathengi eguqukayo ukuhlala kumdlalo.
Iindlela eziThengisayo zoThengiso
Iivenkile zentengiso zinxibelelene kakhulu ne-intanethi kunye nohlalutyo lokuziphatha kwabantu. Zininzi izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo:
Ubukho beendaba ezentlalo
Nangona kunjalo, ayisiyiyo yonke loo nto. Umzi mveliso wevenkile yanamhlanje kufuneka wenze amava amnandi kubathengi kuba abantu banomonde omncinci kule mihla. Njengoko uPhilip Green watsho, “Abantu bahlala beyokuthenga. Ininzi yemizamo yethu ilungile: 'Senza njani ukuba amava eentengiso abe mahle?' ”
Njengoko i-intanethi izisa ezinye iindlela zokufikelela kubathengi, abathengi baqonda ukuba banamandla ngakumbi kunangaphambili. Namhlanje, abantu bafuna imizuzwana embalwa ukwenza isigqibo, kwaye ichaphazela indlela abanxibelelana ngayo nabaphulaphuli. Unokufumana ulwazi ngakumbi malunga nokuziphatha kwabathengi Apha.
Ukufezekisa inqanaba lokwaneliseka okuphezulu, abathengisi basebenzisa itekhnoloji kuzo zonke iinkqubo. Nantsi indlela.
Ukulandelwa kwempahla -Ukutshintshiselana ngeDatha ye-Elektroniki (i-EDI) kuvumela ukutshintshiselana ngamaxwebhu oshishino ngekhompyuter nangekhompyuter. Iyanciphisa iindleko, inyusa isantya sokudlulisa idatha, inciphisa iimpazamo, kwaye iphucula ubuhlakani beshishini. Inika amandla ukulandelela okwenziwe lula kwentengiselwano phakathi komthengisi kunye nevenkile.
Iinkqubo ezizalisayo ezizenzekelayo - ezi nkqubo zisebenza phantse kuwo onke amashishini, zinceda abathengisi ukuba basebenze ngokuzenzekelayo kwaye baphucule ukuzaliswa kweendidi ezininzi zeemveliso, ukusuka kwimveliso entsha ukuya kwiingubo. Kuba le nkqubo izenzekelayo, abasebenzi banokugxila emsebenzini wabo ngaphandle koloyiko lweemveliso ezilahlekileyo okanye ezonakeleyo ezishelfini.
Iishelufa ezibonakalayo - iivenkile zentengiso zexesha elizayo ngekhe zibenamashalofu agcwele iimveliso. Endaweni yoko, baya kuba nayo Iivenkile zedijithali apho abathengi banokuskena iimveliso. Ngandlela thile, oku kuyakuba kukwandiswa kwezitena nodaka kwiwebhusayithi yomthengisi, kubonelela ngamava okuthenga angazami.
Iirejista ze-AI - Iindidi ezintsha zeerejista zivumela abathengi ukuba baskene izinto zabo ngaphandle kocashier. Iirejista zeSmart sisisombululo samva nje ekudaleni amava abathengi abathengi. Nangona kunjalo, lisekho igumbi lokukhula kunye nokuphucula iinkqubo zokwamkelwa kwento, ukuchongwa kwabathengi, kunye neentlawulo.
I-AR kunye neVR kwintengiso -Enye into entsha yetekhnoloji ephucula amava okuthenga iyinyani kwaye iyinyani. Ngelixa abathengi bonwabile bezama iimpahla okanye bajonge ifenitshala kwindawo ebonakalayo, amashishini onwabela iindleko ezincitshisiweyo. I-AR kunye neVR zikwanikezela Ezinye iindlela zokuthengisa ezinokusebenzisana kunye nokubandakanyeka ngakumbi kwiiapps.
Iibhikhoni ezikufutshane - beacons zizixhobo ezingenazingcingo ezinokubona abasebenzisi beefowuni eziphathwayo. Ezi zixhobo zinceda iivenkile zinxibelelane nabathengi abakhuphele usetyenziso lwefowuni. Ngeebhakoni, amashishini anokunxibelelana nabathengi, athathe inxaxheba kwintengiso yexesha lokwenyani, andise ukuthengisa, aqonde indlela yokuziphatha kwabaxumi, kunye nokunye
Ukuhambisa ngokuzenzekelayo Ukuhambisa ngokuzenzekelayo kugcina ixesha elibalulekileyo elinokusetyenziselwa ukwenza izigqibo okanye ezinye iinkqubo. Iinkampani zisebenzisa isoftware ukuseta imigaqo yokuhambisa iiodolo, umzekelo. Amashishini nawo anokuzenzekelayo iilebheli zokuhambisa, amaxwebhu erhafu, uluhlu lokucholwa, iziliphu zokupakisha, njl.
Isetyana - iirobhothi ngokuqinisekileyo ziya kuthatha imisebenzi yabantu. Kanye njengokuba babulala iintsholongwane kwizibhedlele ngexesha lobhubhane we-coronavirus, iirobhothi zinokusetyenziselwa ukuhambisa iimpahla ezishelfini, ukuhlalutya uluhlu lwezinto, nokucoceka. Banokutshintsha endaweni yokugcinwa kweenkonzo zabathengi okanye balumkise malunga neengozi zokhuseleko.
Iivenkile zentengiso zihambe umgama omde ukusuka kwiivenkile zikamama-kunye-pop ukuya kwiishelufa ezibonakalayo. Ukudityaniswa kophuhliso lwetekhnoloji, amashishini athengisa aphila kwaye amkela uguquko lwetekhnoloji. Namhlanje, basebenzisa zonke iindlela ezikhoyo zokunyusa isiseko sabathengi kunye nokubonelela ngokuthenga okungagungqi.
Imikhwa yetekhnoloji yamva nje, enje ngeerobhothi, ukuthunyelwa okuzenzekelayo, inyani ebonakalayo, kunye neebhonikoni ezikufutshane, zinceda amashishini ukuba ahlale eyinxalenye yobomi babantu. Iinkampani ngoku zinokusebenzisa ezinye iindlela zokuthengisa ezidityaniswe namava okuthenga aphucukileyo ukubonisa iimveliso zazo kunye nokungqina ukuba uphawu lwazo lubalulekile.
tags: iirejistakukubhadla okungeyonyaniNyaniso eyongeziweyoiinkqubo ezizalisa ngokuzenzekelayoukulandelwa kwempahlakufutshane neebhakanaUphawu lokuthengisaukuthengisaukuthengisa iirobhothiimithombo yeendaba zentengisoItekhnoloji yokuthengisaiindlela zentengisoamava omsebenzisi wentengisoUyilo lwewebhu yokuthengisandiphilaiishelfu ezibonakalayo
Uphando lweHashtag, uHlaziyo, ukuJonga, kunye nezixhobo zoLawulo